Mac miaraka amin'i Monterey ary maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro dia avy amin'ny Mac | Avy amin'ny mac aho
Mazava ho azy fa ity herinandro ity dia hangover amin'ny WWDC ny alatsinainy 7 jona lasa teo. Betsaka ny vaovao mifandraika amin'ireto fihaonambe ireto sy ny Keynote voalohany natomboka ny alatsinainy lasa teo, manomboka herinandro vaovao isika izao nefa tsy mialoha raha tsy mieritreritra ny famerenana ireo hevitra misongadina ao amin'ny hoe avy any Mac aho. Ny vaovao Apple dia tsy mijanona ary Mandehana lavitra any ankoatry ny fihaonamben'ny mpamolavola, manana herinandro feno vaovao mahaliana izahay, misy ny fivoahana ary ambonin'izany rehetra izany vaovao maro mifandraika amin'ny fanaovan-tsonia Cupertino.
Ny vaovao voalohany tianay hasongadina amin'ity herinandro ity ary mazava fa mifandraika amin'ny kaonferansa Alatsinainy no manondro ny solosaina izay hanohana ny rafitra fiasan'ny macOS Monterrey. Tsy dia misy fiovana be loatra raha oharina amin'ny kinova Big Sur fa toy ny mahazatra ny tolo-kevitra dia hoe raha azonao atao, manavao.
Andininy manan-danja iray hafa ao amin'ireo kinova vaovao natombok'i Apple na natolotra ny alatsinainy izao ny manampy ny safidy ambany herinaratra ho an'ny iPads sy Macs miaraka amin'ny rafitra fiasa vaovao. Amin'io lafiny io ity safidy ity dia ho azon'ny ekipa rehetra Apple mahaliana tokoa.
Nisy nilaza ve fa maty ny ankamaroan'ny mpanohana? Toa izany ny orinasa Cupertino dia manomana kinova vaovao amin'ny birao mahery ho an'ny sehatry ny matihanina ary Amin'ity tranga ity dia afaka manampy processeur Intel aho araka ny tsaho.
Mba hamaranana dia zarainay aminao ny vaovao momba Fanamby amin'ny Andro Iraisam-pirenena Yoga. Ity iray ity Fanamby izay hanomboka ny 21 Jona ho avy izao dia iray amin'ireo fanamby napetraka isan-taona nandritra ny fotoana kelikely tao Apple, ireo mpampiasa Apple Watch izay manao yoga dia miandrandra azy io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Mac miaraka amin'i Monterey ary maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro dia avy amin'ny Mac aho